SAWIRRO: Waddooyinka iyo Guryaha Xamar oo cinwaanno loo sameyey - Caasimada Online
Home Warar SAWIRRO: Waddooyinka iyo Guryaha Xamar oo cinwaanno loo sameyey
SAWIRRO: Waddooyinka iyo Guryaha Xamar oo cinwaanno loo sameyey
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa Shalay hirgaliyay Mashruuc ciwaanno loogu sameynayo Waddooyinka iyo Guryaha ku yaalla magaalada Muqdisho.
Maamulka ayaa si rasmi ah u bilaabay Mashruucaan lagu nambareynayo dhamaan Guryaha ku yaala degmooyinka Gobolka Banaadir, islamarkaana Magacyo loogu sameeynayo Jidadka.
Mashruucaan oo ay fulin doonaan Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Soomaaliya ayaa waxaa soo abaabulay oo diyaariyay Maamulka Banaadir.
Mashruucaan oo ah tillaabo Hormar leh ayaa waxey kamid tahay Isbadalka naqshada Caasimada, siduu sheegay Afhayeenka Maamulka Banaadir.
Ciise Maxamud Xalane oo Madax ka ah Mashruuca ayaa yiri “Tani waa qaabka Jideynta, magac u sameynta guryaha ku yaalla Gobolka, waana tallaabo lagu ogaan karo horumarka dalka, marka waxaan leeyahay qofkasta haka qeyb qaato”
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa Qorshahan ku tilmaamay “Mashruuc Taariikhi ah” oo Nolosha Caasimada dib usoo celinayo.